Marka hore, iyada oo la-socodka fiirsashada oksijiinta: Waqtigan xaadirka ah, mashiinnada dhexda-ilaa-dhammaadka ah ee suuqa guud ahaan waxay adeegsadaan shaashadaha LCD-ka cad ee BD, waxayna leeyihiin aalad u gaar ah oo lagula socdo ogsajiinta si loo ogaado, taas oo hubin karta fiirsashada oksijiinta ee mashiinka waqti. Haddii aad haysato lacag aad ku iibsato fu ...
Daryeelka caafimaadka maalinlaha ah: 76% shaqaalaha qoorta-cad ayaa ku jira xaalad caafimaad-hoosaad ah. Dadka isticmaali kara waxaa ka mid ah shaqaalaha xafiiska cad-cad, barnaamijyada, haweenka uurka leh, iwm, shirkado wanaagsan, niman wanaagsan, waxayna u diyaarin karaan koronto-dhaliye daryeel caafimaad shaqaalaha iyo kuwa jecel. 1-2L waa baabuur caafimaad ...
Maxaa dhacaya haddii aad isticmaasho oksijiin oo aadan u baahnayn?
Jidhkaagu ma noolaan karo la’aanta ogsajiinta aad ka neefsato hawada. Laakiin haddii aad qabto cudurka sambabka ama xaalado caafimaad oo kale, waxaa laga yaabaa inaadan ku filnayn. Taasi waxay kugu reebi kartaa neefsasho la'aan waxayna dhibaato ku keeni kartaa wadnahaaga, maskaxdaada, iyo qaybaha kale ee jirkaaga. Marka xubnaha qoysku ay xanuunsadaan ...